यी ३ राशिका युवतीहरुसँगको प्रेम कहिले पनि सफल हुँदैन … – PathivaraOnline
Home > गसिप > यी ३ राशिका युवतीहरुसँगको प्रेम कहिले पनि सफल हुँदैन …
यी ३ राशिका युवतीहरुसँगको प्रेम कहिले पनि सफल हुँदैन …
admin November 20, 2020 गसिप, जीवनशैली, रोचक	0
एजेनसी । आज भोली बिवाह अगाबै युवा युवती बीच प्रेम सम्बन्ध रहने गर्छ। यस्ता केही सम्बन्धहरु बिहेमा परिणत हुन गर्छन भने केही छोटो समयमानै अलग हुने गरेको पाईन सकिन्छ। हरेक पुरुषले आफ्नो जीवनसाथी सुन्दर होस् भन्ने चाहना राख्छन् र उनीहरु रुपको धनिसँगै सफा मन भएका युवतीहरुको साथमा जीवन बिताउने उदेश्यले प्रेम सम्बन्धमा रहने गर्छन। तर, यो सौभाग्य कसैलाई जुर्छ, कसैलाई जुर्दैन।
यद्यपी, ज्योतिष शास्त्र अनुसार यी तल प्रस्तुत गरिएको राशिका युवतीहरुले पुरुषलाई छोटो समयमा धोका दिएर अलग हुने वा लामो समय प्रेम सम्बन्धमा रहन सक्दैनन्। कुन -कुन राशिका युवतीहरु यस्ता हुन्छन जान्नुहोस् :
मेष: मेष राशीका युवतीहरु लामो समयसम्म एकै पुरुषसँग प्रेम सम्बन्धमा रहन सक्दैनन्। यस राशिका महिलाहरुले कुनै प्रकारको खास भावना नदेखाउने भएकाले पुरुषहरु सम्बन्धबाट टाढा रहन कोशिस गर्दछन्। यसको वास्तविक यथार्थ भने ज्योतिषहरूकाे बिज्ञताकाे आधारमा फरक फरक मत भने देखिन्छ । तथापि यस राशिका युवतीहरू कमै पुरूषहरूसँग सम्बन्ध राख्ने देखिन्छ ।
कन्या: कन्या राशिका महिलाहरु धेरै जिद्दी र रिसालु स्वभावका हुने गरेको भएपनि आफ्नो पार्टनरको भने राम्रो हेरचाह गर्ने गर्छन। तर पुरुषहरुले यी राशीका महिलाहरुसँग प्रेम सम्बन्धमा रहेका पुरुषहरुले धेरै दुख कष्टको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यस राशिका युवतीहरू पुरूषहरूसँग क्षणिक सम्बन्ध राख्न चै खोज्छन् तर याद गर्नुहाेस् यस राशिका युवतीहरूले युवक वा पुरूषहरूकाे वास्तविकतालाइ पनि नजरअन्दाज गर्ने गरेकाे पाइन्छ ।
कुम्भ : कुम्भ राशी हुने महिलहरुको इच्छा चाहना वा माग अत्यधिक हुने गर्छ। यिनीहरुको स्वभाव कुनै बालकको भन्दा कम नहुने हुँदा यस राशीका युवतीहरुसँग प्रेम सम्बन्ध लामो समय टिक्न सक्दैन। यी युवतीहरु आफ्ना प्रेमीलाई भने धेरै माया दिने गर्छन। उनीहरुको बच्चाजस्तो व्यबहारले गर्दा प्राय पुरुषहरु सम्बन्धबाट छुटिन प्रयास गर्ने गरेको पाईएको छ।
बुर्ज खलिफामा फ्ल्याट, ३ करोडको औंठी सहित शिल्पाले पाइन् यस्ता उपहारहरू…
पुरुष बिना महिलालाई केहि फरक पर्दैन तर महिला विना पुरुष बाँच्नै सक्दैनन्
फेसबुक लाइभकै कारण भारतीय कलाकार एलाज खान प्रहरी खोरमा! हेर्नुहाेस्
सोनिका रोकायले पारससँगको सम्बन्ध बार खोलिन् रहस्य! लेखिन् यस्तो स्टाटस! हेर्नुहोस्
सेतीले लगेकाे दाईकाे लाश ४५ दिनमा भेटियो, बहिनीसंग शव ढाक्न कात्रो किन्ने पैसा पनि छैन (भिडियो हेर्नुस्)